စန်း Da အတွက်ဥရောပချန်ပီယံ - Self-ကာကွယ်ရေးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Ivaylo Georgiev နှင့်အတူအင်တာဗျူး
ပုံရိပ်တွေ: Ivaylo Georgiev
ငါအမှလူငယ်တစ်ဦးနှင့်အာရုံစိုက်တင်ပြ တိုက်လေယာဉ်ပျံ - Ivaylo Georgiev - စန်း Da, စန်း Da အတွက်အင်္ဂလိပ် Cup Winners အတွက်ဥရောပချန်ပီယံ - 70 ကီလိုအထိအဖြစ်ကတခြားချန်ပီယံအတွက်များစွာသောအခြားခေါင်းစဉ်-ဆုရှင်ပါ။ Ivaylo သည်သူ၏တိုက်ပွဲများတာဝန်ခံထုတ်လွှတ်နေတဲ့နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာရန်ပွဲကလပ်၌သူ၏အလုပ်သင် "Atila" ကိုမောင်းထုတ်။ သူကခဲယဉ်းအလုပ်ကအမြဲပိတ်ထားချေကြောင်းဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သူယခုအချိန်တွင်ငါယခုနှစ်များစွာအဘို့ပြုတော်မူသော, (ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ခံပညာထဲကနေအမျိုးမျိုးသော Allow နည်းစနစ်ပေါင်းစပ်ပြီး, ရောနှောကိုယ်ခံပညာ Arts- တစ်ဦးရန်ပွဲအားကစား) ММАတစ်ဦးမှသင်တန်းဆရာဖြစ်၏။ အားကစားငါ၏အအစောပိုင်းကလေးဘဝမှငါ့အသက်တာ၌ပါ! ငါကြိုးစားခဲ့ပထမဦးဆုံးအားကစားနပန်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အတွက်ဒီပလိုမာရှိသည်နှင့်ငါအောင်မြင်စွာဘဝမှာအားကစားနှင့်ဘောဂဗေဒပေါင်းစပ်။
ငါခြောက်လကွဲပြားခြားနားသောအားကစားအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုငါ၏အသီးအသီးမှာပါဝင်ထားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကြောင်းထင်ပါတယ်။ ငါအနိုင်ရနဲ့ကျွန်မမဆုံးရှုံး - သောဖြစ်ပါသည် အားကစား၏မှော် - အနိုင်ရတဲ့နှင့်ဆုံးရှုံးများ၏ဖိအားနှိမ်ရန်။
ပထမဦးဆုံး (70 ကီလိုဂရမ်အထိ) ကို San Da အတွက်အင်္ဂလိပ်ဖလားအဘို့အကြီးနှင့်ဒုတိယ (74 ကီလိုဂရမ်အထိ) ဥရောပဖလားအဘို့အကြီး - အင်္ဂလန်အတွက်တိုက်ပွဲတွေနှစ်ယောက်တည်း။ ငါနှစ်ဦးစလုံးခွက်အနိုင်ရအလွန်အမင်းပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအောင်ပွဲဘဝမှာအများဆုံးစိတ်ခံစားမှုအချိန်လေးတချို့ရှိနေပါတယ်။ ငါ့ကိုငါ့ဦးခေါင်းအထက်ဘူဂေးရီးယားအလံမြှင့်ရန်အဘို့အကြှနျုပျသညျဤလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ကြောင်း, အိပ်မက်ကြီးနဲ့ကျွန်မဆိုတဲ့အချက်ကို၏ဝမ်းသာတယ်။
ငါအားကစားငါ့ကိုအားပေးတော်မူပြီအဘယ်အရာပေါ်မှာစျေးနှုန်း၎င်း tag ထားနိုင်လျှင်, ငါကငါ့ကိုမအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသန်းကြွယ်သူဌေးလုပ်ပြောချင်!
ငါအားကစားများအတွက်အနည်းငယ်အချိန်ကိုရှာဖွေရန်သင့်စာဖတ်သူများအလိုရှိ၏။ အားကစားဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါသည်, အားကစားအားကစားဘဝတစ်လမ်းဖြစ်တယ်, စည်းကမ်းပါ! အားကစားခိုင်မာတဲ့ဖြစ်ရန်နှင့်စွန့်လွှတ်ဖို့မကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်! အားကစားကျွန်တော်တို့ကိုလူ့စေသည်!
အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ ရန်ပွဲကလပ် "Atila"
ဥရောပချန်ပီယံ, Ivaylo Georgiev, ရောနှောကိုယ်ခံပညာအနုပညာ, MMA မှ, စန်း Da, Silvia Dimitrova, အားကစား | 01-02-2017 | rating:5/ 30